I-Evil Dead: The Game, umoya omusha kulolo hlobo [Ukuhlaziya] | Amagajethi Ezindaba
I-Evil Dead: Umdlalo, umoya omusha kulolo hlobo [Ukuhlaziya]
UMiguel Hernandez | 11/06/2022 20:55 | General, Ikhaya, Izibuyekezo, Imidlalo yevidiyo
I-Evil Dead iletha idethi yamanje isango elingenamahloni elisikhumbuza nakanjani leyo u-Sam Raimi ayikhipha esigqokweni sakhe nge-trilogy yakhe yamafilimu ngeminyaka yama-eighties, kanye neyokugcina ngo-2013. Inhlanganisela ephelele phakathi kokunyakazisa nokuhlekisa okumnyama. lokho akubonakali kulahlekelwe ingqikithi yakho, ingasaphathwa eyokuphuma esitayeleni.
Sehlela phansi kuzilawuli nge-Evil Dead: The Game ohlelweni lwayo lwe-PS5 futhi siyakutshela ukuthi izidalwa zangaphansi komhlaba ziwela kanjani emakhonweni ethu. Zitholele nathi igeyimu edonsa amehlo evela kwa-Saber Interactive ngentengo emaphakathi nenkundla eminingi.
Ohlotsheni olungapheli njengokusinda, kuba nzima ukuthola umoya wokuphefumula, nokho. I-Evil Dead: Umdlalo uyazi ukuthi ungakufaka kanjani inselelo, ngaphandle kokwenza kube nzima kakhulu kuwe, kodwa kwanele ukudala ukukhanga okukugcina uphambi kukamabonakude (noma ukuqapha) isikhathi eside. Kithina, sisebenzise inguqulo yesizukulwane esisha se-PlayStation 5 (PS5) ebukeka iyinhle ngendlela elindeleke ku-console, ngokuya nge-fluidity, ukuchazwa kwezimo kanye, ngaphezu kwakho konke, izikhathi zokulayisha.
1 ngokuhlonipha isaga
2 I-inthanethi ekhangayo
3 edlala njengosathane
I-Evil Dead: Umdlalo uveza kuyo yomibili imininingwane yawo kanye nesizinda sawo yonke indawo yomdlalo wevidiyo, emele izilo nabalingisi esingababona kulo lonke uchungechunge lwefilimu. Kodwa into ayigcini lapho, njengoba abalandeli abaqine kakhulu bazo zombili izinhlobo kanye nemisebenzi ye-Sam Raimi bayothola izimangalo zabo zaneliswe kokubili ngokuthi izilungiselelo eziningi zesithonjana zamafilimu okukhulunywe ngazo ngenhla zimelelwa ngokwethembeka.
Ngakolunye uhlangothi, ukuthuthukiswa kwesenzo kuhlanganisa ngokuthembekile ingqikithi ye-saga, ehlanganisa ukwesaba, isenzo ngaphandle kwekota kanye namahlaya "amnyama". Mayelana nalokhu, kuyasiza kakhulu ukuthi uBruce Campbell (odlala u-Ash Williams), kanye nabanye abalingisi bakwazile ukuba yingxenye yomdlalo wevidiyo ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokunethezeka ngaphambi kwemakethe, ngezinye izikhathi, okubonakala sengathi ifuna ukumunca kahle lokho kwe-cinema.
Ngokusobala i-Saber Interactive ifake inyama ku-grill ngenhloso yokuhlonipha le saga, ikakhulukazi ezinseleleni zodwa.
Imininingwane, ukwehla esibhekana nakho ezindaweni ezithile ekuthuthukisweni kwendaba kanye nesenzo, ukushoda kwezinsiza nezinye izici eziningi, kudala umuzwa osondelene nokwesabeka kosindile okujwayelekile kwesaga njenge-Resident Evil, nokho,uzophenduka ukukhungatheka nentukuthelo ngezikhathi ezithile. Uma kubhekwa ubulula obedlulele okuholwa kukho imidlalo yamavidiyo amaningi namuhla, cishe siyaduduzeka ukubona inselele i-Evil Dead: The Game esibeka yona mayelana nalokhu.
Nqoba izinselele ezilethwa inguqulo ngayinye yegeyimu Kuyacaca ukuthi sikwazi ukuthola abalingiswa abasha noma izici ezinikeza incazelo eyengeziwe endabeni, ngakho-ke kuyinketho esingeke siyizibe.
Kumodi yabadlali abaningi iqembu liyancishiswa, ngomqondo ongokomfanekiso, ukuze ilwa phakathi kwabasebenzisi abane abanezinhlamvu ezihlukene, kanye neDemoni lesiKandarian. Umgomo omkhulu kuzoba ukucekelwa phansi kwe-Necromnomicon, kodwa ngeke kwenzeke ngaphandle kokulandelayo:
Thola izingxenye ezintathu zemephu
Ikhasi elivela ku-Necronomicon
Kukho konke lokhu, kuzodingeka silwe nezindimbane, isimo esigcwele abalingiswa okuwukuphela kwenhloso yabo kuwukubukela phansi isimilo sethu, naphezu kobunzima bayo obufinyeleleka ngisho nezikhathi lapho ungenakho ukukhetha ngaphandle kokubaleka njengegwala. Ungakhathazeki, kuzokubiza ukuthi "ufe" izikhathi eziningana ukuze uqonde lokho njengoba bethi: Amathuna agcwele isibindi. Kwesinye isikhathi isu lizodlula emjahweni nakanjani.
Uma sesiphethe insangu sizokwazi ukuhlula abaMnyama abavikela "ithuna", esizoqhubeka nokulibhubhisa uma isixuku senqabe ... Sizokwenza kanjani? Ukuhlala isikhathi esithile endaweni. Kungase kubonakale kulula uma yonke into ibingalungiselelwanga kahle ukuthi ulwe.
Ngaphakathi kwemodi eku-inthanethi singakhetha amakilasi amane okungenzeka, lapho sizoba nabalingiswa abathile abavela kwisaga. Sizoba nabelaphi, izinguqulo ze-Ash ezinciphisa ukwesaba ukuthuthukisa impendulo yethu nokunye okuningi.
Ukwesaba, ngendlela, kuwumshini othakazelisayo kakhulu owengeza omunye umthamo wobuhlanya emdlalweni. Uma sichitha isikhathi esiningi silwa, ngaphandle kwemithombo yokukhanya, yenaIzinga lokwesaba abalingisi lizophakama futhi ukulawula kuzofiphala, kubenze bangenwe amademoni. Ungakhathazeki, sinamathuluzi ahlukahlukene okubamisa, noma ngabe iDemoni ligcine lithathe uzakwethu.
Ukubambisana phakathi nempi, ukusatshalaliswa okufanele kwamakilasi kanye nokusetshenziswa kwezenzo ezihlanganisayo njengokungathi umdanso kuzoba yisinqumo esibalulekile empumelelweni yomdlalo.
Ngakolunye uhlangothi, i-Kandarian Demon izolawulwa ngomunye umdlali (imbangi), omgomo wabo omkhulu uwukuvikela i-Necronomicon futhi uma kungenzeka, kubulawe zonke izinhlamvu "zomuntu" ezilawulwayo. Ukuze senze lokhu, singandiza sizungeze isiteji, sibabekele izicupho, sibe nezinto zegeyimu ezifana nezimoto noma abalandeli, nokunye okuningi. Ngale ndlela jUkudlala njengomuntu omubi ku-movie akwenzi nje umqondo owengeziwe, kodwa futhi kuyahlekisa kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, umdlalo ihlushwa ukuphindaphinda kwimodi ye-inthanethi okwamanje uma kubhekwa isilungiselelo sayo esiyingqayizivele kanye nobunjiniyela. Futhi, ukudlala njengeDemoni kuba nzima kakhulu uma sifuna ukuzuza impumelelo, futhi umuzwa wokulawula ungathuthukiswa, ikakhulukazi kokuhlangenwe nakho komdlali oyedwa.
Ngakolunye uhlangothi, ukujwayela kwe-franchise futhi okuhlongozwayo njengomdlalo wabadlali abaningi ongalingani kuyathandeka impela. Umdlalo unomsebenzi okufanele wenziwe, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuphakelwa okuqukethwe okwengeziwe, nakuba i-Saber Interactive isivele iwuqinisekisile umgwaqo wayo, ukuthuthukiswa kanye nezibuyekezo. intengo yokuqala, kusuka kuma-euro angama-39,99 kuphela ikwenza kuthakazelise. Ngokungangabazeki uzokwazi ukujabulela imidlalo emihle nabangane bakho, lapho i-choreography izoba nesinqumo sokufeza izinhloso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » I-Evil Dead: Umdlalo, umoya omusha kulolo hlobo [Ukuhlaziya]
I-RECICLOS: lolu uhlelo lokusebenza oluguqula indlela yokugaywa kabusha ngemiklomelo
I-Facebook ne-Twitter: umehluko omkhulu nokufana